हेर्नुहोस् माछा समाउने अनौठो तरिका : भिडियो सहित – Kavrepati
Home / मनोरंजन / हेर्नुहोस् माछा समाउने अनौठो तरिका : भिडियो सहित
हेर्नुहोस् माछा समाउने अनौठो तरिका : भिडियो सहित
admin August 18, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 211 Views
भिडियो अन्त्यमा हेर्नुहोस हेर्नुहोस् माछा समाउने अनौठो तरिका भिडियो सहित :अबदेखि काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन ? कस्तो हुन्छ? कसरी गरिन्छ? सबै क्षेत्र ठप्प नपारी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अघि सारिएको अवधारणा ‘स्मार्ट लकडाउन’ हो। सीसीएमसीले यसमा सङ्क्रमणको जोखिम र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञामा कडाइ वा खुकुलो गरिने जनाएको छ। यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न देशका विभिन्न भागलाई उच्चदेखि न्यून जोखिमका आधारमा पाँच वर्ग – रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रीन र ह्वाइट जोन – भनिन्छ।
सङ्क्रमण दर र त्यसको प्रभाव हेरी निषेधाज्ञामा कडाइ गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुने शर्माले बताए। उनका अनुसार धेरै जिल्ला एकसाथ प्रभावित भएको खण्डमा कुन तहको कडाइ गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्नेछ। काठमाण्डू उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा तत्काल स्मार्ट लकडाउन लागू गर्ने तयारी नभएको अधिकारीहरूले बताए।
काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुरमा भदौ ८ गतेसम्म गत साउन २८ गते जारी निषेध आदेश लागु छ। हाल शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प छन्। सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्टलगायत मनोरञ्जन स्थल, स्वीमिङ पुल, , सङ्ग्रहालय, रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद निषेध थियो।
Previous द भोईस अफ नेपालकी तारा श्रीस मगर इन्द्रेणीमा, भयो ऐतिहासिक कार्यक्रम : हेर्नुहोस भिडियो सहित
Next बोरिङ खन्दा मिथेन ग्यास मिसिएको पानीको अग्लो फोहोरा निस्केपछि स्थानीयवासी परे चकित !